Ibhokisi leNgcaciso engenaManzi, i-Intelligent Loudspeaker Box, i-Wireless Intelligent Loudspeaker Box Abakhiqizi kunye nabathengi baseChina
Inkcazo:Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi,Ibhokisi leNgcaciso,Ibhokisi leWebhuthi elingenangqondo,Ibhokisi leNgcaciso eliLungileyo elingenaManzi,,
Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi,Ibhokisi leNgcaciso,Ibhokisi leWebhuthi elingenangqondo,Ibhokisi leNgcaciso eliLungileyo elingenaManzi,,
Home > Imveliso > System Somlomo System > Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi
Iintlobo zeMveliso ze- Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi , Ibhokisi leNgcaciso ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Injongo ezininzi I-Bluetooth Somlomo ongenazintambo
Isithethi seBluetooth esisebenzayo esinezixhobo ezahlukeneyo ngebhetri enkulu ye-1200, i-ultra-low power usetyenziso, ukulibaziseka kwe-ultra-low, ukungenazintambo ezingenasiphelo kunye nokungaxilwanga, uxhumano lweBluetooth lulula kwaye lukulungele...
Isithethi se-bluetooth ye-wireless yesandi esincinci
I-Solar ngaphandle manzi smart card isithethi isebenzisa Bluetooth 4.2, kwaye uqhagamshelwano uzinzile ngakumbi. Ukudibanisa ngokukhawuleza ifowuni, ithebhulethi, izixhobo zeekhomputha, ezifana nentsimbi ye-hd kwifowuni, cinga ngomculo ongenawo...
KwiChina Ibhokisi leNgcaciso eliManzi elingenaManzi Abaxhasi
Amandla alanga awanelanga kuphela kwaye anokwethenjelwa, kodwa kwakhona uhlobo olutsha lwamandla enobungakanani bendalo. Ngoku ezininzi izinto zasekhaya ziye zaqala ukusebenzisa amandla elanga ukuhlawula izixhobo zombane. Ingasetyenziselwa njengesithethi sangaphandle, kungekhona nje ingakwazi ukuguqula amandla e-altare ngombane, kodwa nayo ineempawu zokungena kwamanzi, ukungabi ngothuli, ukumelana nokushisa okuphezulu, njl. Ngonyango olukhethekileyo lwezinto eziphathekayo zomoya, nangaphantsi kwe-irradiation eqhubekayo yangaphandle ukukhanya kwe-ultraviolet, ingaba yintsha kwaye ihlala ibe yintsha. Uxhumo lweBluetooth lukulungele ngakumbi.
1. Isisithethi se-bluetooth yezwi elingenasiphelo esichengileyo
2. Uyilo olushukumisayo kunye nolwavelwano, oluphathekayo nolunzima
3. I-slot ye-TF ekwakhelwe ngaphakathi, ukuxhasa ikhadi le-TF ukudlala umculo
Fumana isikhombi ongasilenga kwi-backpack yakho ukuze unike umsebenzi wakho ongaphandle umva.
5. Phendula ifowuni uze uxhume ifowuni nge-bluetooth. Isithethi sixhotyiswe nge-microphone, esinokusetyenziswa ngokulula nge-ray
6. Ukuxhotyiswa ngeeseli zelanga kunye nokwakhiwa kwamabhethri e-lithium ahlawulelwayo, unokudlala umculo ongenazintambo zonke ngokwawo
7. Ifowuni yefowuni, i-tablet PC, i-MP3MP4 ingaxhunyezwa, kunye neendlela ezahlukeneyo ezinokuzibona ziyakwazi ukubona umdlalo womculo ongenazintambo
Ibhokisi leWebhuthi elingenangqondo
Ibhokisi leNgcaciso eliLungileyo elingenaManzi
ILanga leLanga elingenaManzi